Iyo nyowani vhezheni yeAsterisk 17 inosvika, iyo yakavhurwa sosi yeVoIP fomati | Linux Vakapindwa muropa
Mushure megore rekuvandudza iro idzva rakagadzikana bazi reakavhurika ekutaurirana chikuva Asterisk 17 yakavhurwa, kushandiswa kushandisa software PBX, izwi kutaurirana masystem, VoIP masuo, IVR (izwi menyu) system kuronga, izwi tsamba, musangano kufona uye kufona nzvimbo.
Asterisk 17 inopihwa kuchikamu chekuburitswa nerutsigiro rwenguva dzose, ane zvinyorwa zviri kuumbwa mukati memakore maviri. Tsigiro yebazi rapfuura reLTS reAsterisk 16 ichagara kusvika Gumiguru 2023, uye iyo Asterisk 13 bazi kusvika muna Gumiguru 2021. Pakugadzirira shanduro dzeLTS, chinangwa chikuru ndechekusimbisa kugadzikana uye kugadzirisa mashandiro, nepo kuisa pamberi shanduro dzese kuwedzera basa .
Asterisk 17 nhau huru
Pakati pezvinhu zvikuru zvitsva zvinoonekwa mushanduro iyi nyowani kuiswa kweshandiso nyowani "BlindTransfer" iyo inopa basa rekukwanisa kuendesa nzira dzese dzakabatana nemuridzi kuchinangwa kune "blind blind" mode. Izvi inobvumira mushandisi kuisa runhare mune imwe modhi kwaisingazive kana munhu wacho achadaira runhare
Pasuwo rekuronga musangano weConBridge, ma parameter "average_all", "highest_all" uye "lower_all" akawedzerwa kuchisarudzo remb_kuzvibata iyo kukosha REMB (yakanyanya kufungidzirwa yekugamuchira bit rate), iyo inofungidzira mashandiro emutengi, zvinoverengerwa uye yakatumirwa kune wega mutumwa uye haina kusungirirwa kune chaiye anotumira.
ARI (Asterisk REST Interface) iyo API yekugadzira ekunze ekutaurirana mashandiro ayo anogona kutungamira zvakananga nzira, mabhiriji uye zvimwe zvinhu zvefoni muAsterisk, vakagamuchira zvigadziridzo kuti vakwanise kushandisa kugona kutsanangura mafirita ezviitiko- Icho chishandiso chinogona kudoma rondedzero yemarudzi ezviitiko anotenderwa kana kurambidzwa, uyezve muzvikumbiro chete zviitiko zvinobvumidzwa mune chena runyorwa kana kwete mune nhema runyorwa zvichaendeswa.
Uyewo kuwedzerwa kwekufona kutsva kuti 'fambisa' kuREST API kwakasimbiswa, iyo inobvumidza chiteshi kuendeswa kubva kune chimwe chikumbiro kuenda kune chimwe pasina kudzokera kune yekufona yekugadzirisa script (dial chirongwa).
Iyo nyowani AttendedTransfer app yawedzerwa kune tambo kufona kuchinjiswa Yakaperekedzwa (Anoshanda anotanga kubatanidza kune chakanangwa uye mushure mekubudirira kwekufona kubatanidza munhu akafona) nenhamba yakatarwa yekuwedzera.
Kune rimwe divi, kune zvekare module nyowani "res_mwi_devstate" yeMWI (Zviratidzo zvekumirira Meseji), iyo inobvumidza kunyorera kumabhokisi ezwi emazwi vachishandisa zviitiko "zvekuvapo", zvichibvumira kushandiswa kwemakiyi emamiriro eiyo BLF mutsara seyizwi meseji yakamirira zviratidzo.
Zve "Dial" yakagadzirirwa kumisikidza kubatana kutsva uye kubatana kwako kune chiteshi, misiyano mitsva yakawedzerwa:
RINGTIME uye RINGTIME_MS: ine nguva iri pakati pekugadzirwa kwechiteshi uye kugamuchirwa kwechiratidzo chekutanga cheRINGING.
PROGRESSTIME uye PROGRESSTIME_MS: ine nguva iri pakati pekugadzirwa kwechiteshi uye kugamuchirwa kwePROGRESS chiratidzo (chakaenzana nemutengo wePDD, Post Dial Delay).
DIALEDTIME_MS uye ANSWEREDTIME_MS: DIALEDTIME uye ANSWEREDTIME sarudzo, dzinopa nguva mumamiriseconds panzvimbo pemasekondi.
Mu rtp.conf ye RTP / ICE, kugona kushambadzira yemuno ice_host_candidate kero pamwe nekero yakashandurwa yakawedzerwa.
Mapaketi eDTLS anogona kugovaniswa zvinoenderana nemutengo weMTU, zvichibvumira kushandiswa kwezvitupa zvakareba pakutaurirana nezveDTLS kubatana.
Wakawedzera "p" sarudzo kumutemo ReadExten wekumira kuverenga seti yekuwedzera mushure mekutsikirira chiratidzo "#".
Iyo DUNDi PBX module inowedzera mbiri yekubatanidza rutsigiro kune IPv4 / IPv6.
Finalmente kurodha vhezheni itsva yeAsterisk 17 vanogona kuitora kubva pawebhusaiti yavo. Kana kubva kuchiteshi nekutaipa unotevera kuraira:
Kana ivo vanogona kuisa Asterisk kubva kune yayo kodhi kodhi nekutevera mirairo kubva pane inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo nyowani vhezheni yeAsterisk 17 inosvika, iyo yakavhurwa sosi yeVoIP fomati